Ebe nchekwa ụmụaka - iSearch
Malite Baby & Nwa ọta akara
A kabeghị nwa ahụ, dị ka ọrụ n'aka n'ime ezinụlọ ọhụrụ ahụ nọ n'ọrụ. Na gburugburu nke afo abughi nani olile anya na-etolite, kamakwa ochicho inwe ihe nile zuru oke maka nwa ntakiri ala nke uwa. N'ezie, nke a gunyekwara n'ime ime ụlọ akwụkwọ ahụ.
Ụbọchị 7 a na-ewu ewu
Site na oke
ọta akara isearch - September 12, 2017 0
Oche oche ụmụaka - arụ ọrụ ma maa mma andmụaka na-etolite ma chọọ akwa eji arụ ọrụ. Ọ bụ ihe ịma aka na-aga n'ihu mgbe niile maka ndị nne na nna ịchọta arịa ụlọ kwesịrị ...
ọta akara isearch - September 2, 2017 0
N'oge na-adịghị anya, ọ ga-adị ugbu a ma ọgbọ ọzọ ga-aga n'okporo ụzọ. Ọtụtụ ndị nne na nna na-atụ egwu ọrụ ọhụrụ ahụ, mana e nwekwara ...